Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica oo Qabtay Wadahadalo Maalgalineed oo Muhiim ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett (bidix) waxa uu u soo bandhigayaa nuqul ka mid ah joornaalka Xarunta Maareynta Dalxiiska Caalamiga ah iyo Dib u Celinta Dalxiiska ee fadhigeedu yahay Jamaica Madaxweyne Ku Xigeenka Fulinta ee DP World, Mohammed Al Maullem. Bandhigan ayaa lagu soo bandhigay dhawaan markii ay soo idlaatay kulamo heer sare ah oo maal-gelineed oo dhinaca dalxiiska ah oo lala yeeshay shirkadda DP World oo ah shirkad weyn oo dhinaca saadka ah oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa dhawaan soo gabagabeeyey shirar maal-gelineed oo muhiim ah oo uu la lahaa shirkadda DP World, oo ah shirkad weyn oo dhinaca saadka ah oo caalami ah oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta (UAE).
Saddex maalmood oo xiriir ah oo shirar socday, ayaa waxaa si dhab ah looga hadlay maalgashiga Dekedda Royal Cruise Dekadda iyo suurtagalnimada in dalka laga dhoofiyo.
Sidoo kale miiska wadahadalka ayaa ahaa horumarinta xarun saadka, gaadiidka badan ee Vernamfield iyo aerotropolis, iyo sidoo kale maalgelinta kaabayaasha kale.
Wadahadalladani waa inay sii socdaan mustaqbalka dhow.
“Aad baan ugu faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in shirarkii aanu la yeelanay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee dhinaca saadka iyo saadka badda ee DP World uu guul ku dhamaaday. Saddex maalmood oo xiriir ah oo shirar ah, waxaan si dhab ah uga wada hadalnay maalgashiga Dekedda Royal Cruise Port iyo suurtagalnimada in dib loo soo dejiyo. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay horumarinta xarunta saadka, gaadiidka badan ee Vernamfield iyo aerotropolis, iyo sidoo kale maalgelinta kaabayaasha kale," ayuu yiri Bartlett.
Guddoomiyaha DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, isagoo u maraya ergaygiisa, Madaxweyne ku xigeenka fulinta DP World, Mohammed Al Maullem, ayaa muujiyay xiisaha. gudaha Jamaica waxayna salaan ka gaarsiiyeen Ra’iisul Wasaaraha, Mudane. Andrew Holness.
Bartlett iyo madaxda DP World waa inay sii wadaan wadahadaladan mustaqbalka dhow ee Maamulka Dekedda ee Jamaica iyo Wasaaradda Kobaca Dhaqaalaha iyo Shaqo Abuurka.
DP World waxay ku takhasustay saadka xamuulka, adeegyada badda, hawlaha dekedaha iyo goobaha ganacsiga xorta ah. Waxaa la aasaasay 2005 ka dib markii ay midoobeen maamulka dekedaha Dubai iyo Dubai Ports International. DP World waxa ay gacanta ku haysaa ilaa 70 milyan oo konteenar oo ay keenaan ku dhawaad ​​70,000 oo markab sanadkii, taas oo u dhiganta 10% taraafikada konteenarada caalamiga ah oo lagu xisaabiyo 82 marinada badda iyo gudaha ee jooga in ka badan 40 wadan. Ilaa 2016, DP World waxa ay ahayd shirkad caalami ah oo ka hawlgasha dekedaha, wixii intaa ka dambeeyeyna waxa ay la soo wareegtay shirkado kale oo kor iyo hoosba u socda.
Intii uu ku sugnaa Imaaraadka, Wasiir Bartlett iyo kooxdiisa waxa kale oo ay la kulmi doonaan wakiilo ka socda Hay’adda Dalxiiska dalka oo ay ka wadahadli doonaan sidii la iskaga kaashan lahaa maalgashiga dalxiiska ee gobolka; Hindisaha dalxiiska Bariga Dhexe; iyo marinka laga galo Waqooyiga Afrika iyo Aasiya iyo fududaynta duullimaadyada. Waxa kale oo jiri doona kulamo lala yeelan doono madaxda DNATA Tours, oo ah hawl wadeenka dalxiiska ee ugu weyn UAE; xubno ka mid ah Jaaliyadda Jamaica ee Imaaraadka; iyo saddex diyaaradood oo waaweyn oo ku yaal Bariga Dhexe - Emirates, Etiad iyo Qatar.
Wasiir Bartlett oo ka imaanaya Imaaraadka ayaa u ambabixi doona magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga, halkaas oo uu kaga hadli doono sanad-guurada 5-aad ee Hindisaha Maalgashiga Mustaqbalka (FII). FII-da sanadkan waxa ka mid noqon doona wadahadalo qoto dheer oo ku saabsan fursadaha cusub ee maalgashiga caalamiga ah, falanqaynta isbeddellada warshadaha, iyo isku xidhka madaxda sare, hoggaamiyeyaasha adduunka, iyo khubarada. Waxaa ku biiri doona Senator, Hon. Aubyn Hill oo awood u leh inuu yahay Wasiirka oo aan lahayn Portfolio ee Wasaaradda Kobaca Dhaqaalaha iyo Abuurista Shaqada (MEGJC), oo leh mas'uuliyadda Biyaha, Dhulka, Dib-u-soo-celinta Ganacsiga (BPOs), Maamulka Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah ee Jamaica iyo mashaariicda gaarka ah.
Wasiir Bartlett ayaa ku soo laaban doona jasiiradda Sabtida, Noofambar 6, 2021.